Vaovao - Ahoana ny fomba hahatonga ny vokatra akrilanao haharitra kokoa.
Ahoana ny fomba hahatonga ny vokatra acrylic anao haharitra kokoa.
Alohan'ny hiresahantsika ny fomba hahatakarana ny acrylic, ny acrylic dia ny fomba hamatorana azy, ny karazan-taratasy acrylic ary ny fahalalana matihanina momba ny acrylic. Androany, hampahafantariko anao indray "ny fomba hitazomana, ho lava ny fiainana serivisy amin'ny vokatra acrylic"?
1.A ny vokatra akrilika amin'ny fampiasana tsy tapaka ny mari-pana dia tsy tokony ho ambony noho ny 60 degre, noho izany dia tokony hialantsika ny fiovan'ny mari-pana ambony acrylic amin'ny fizotran'ny fampiasana.
2. Amin'ny fampiasana na fanodinana akrilika dia tokony hitandrina ihany koa mba hisorohana ny gorodona ambonin'ny tany, ny hamafin'ny vokatra akrilika dia mitovy amin'ny aliminioma, mora ny manala azy, raha azo averina amin'ny laoniny ny volony.
3. Amin'ireo vokatra akrilika marefo na tsy madio ateraky ny gorodona kely na vovoka adsorption elektrostatika dia azonao atao ny mampiasa rano savony 1% miaraka amin'ny lamba malemy mba hamafana azy.
4. Satria ny takelaka acrylic dia manana coefficient manokana fanitarana, noho izany amin'ny fizotran'ny fampiasana sy ny fametrahana azy, dia tsy maintsy jerentsika ny anton-javatra fanitarana hafanana sy ny fihenan'ny hatsiaka amin'ny ravina akrilika, ary tsy maintsy manana elanelam-baravarana hanitarana rehefa mivory. Izany koa dia eo am-panaovana ny acrylic vokatra fivoriambe mila mitandrina ny antsipiriany.
Raha manana vokatra akrilika koa ianao ao an-tranonao, dia mety maniry ny hampiasa ireo fomba etsy ambony hiezaka hitazona azy io. , Tsy maninona raha tsy manana vokatra akrilika ao an-tranonao ianao, afaka mifandray amiko ianao amin'ny fotoana rehetra.
Asehoy Acrylic Stand, Asehoy Acrylic Stand, Asehoy acrylic, Stand Acrylic Display, Fako akrilika, Boaty akrilika,